Milestone New India Aviation: Site na njem awa iri na abụọ ruo nkeji iri isii
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Milestone New India Aviation: Site na njem awa iri na abụọ ruo nkeji iri isii
Airlines • Airport • Aviation • Njem azụmahịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Arụpụtara ọrụ ụgbọ elu mbụ kpọmkwem n'etiti Imphal (Manipur) na Shillong (Meghalaya) ụnyaahụ n'okpuru RCS-UDAN (Atụmatụ Njikọ mpaghara-Ude Desh Ka Aam Nagrik) nke Gọọmentị India.
Ruo taa, arụgola ụzọ 361 n'okpuru UDAN.
Ịrụ ọrụ nke ụzọ a na -emezu ebumnuche gọọmentị India iji guzobe njikọ ikuku siri ike na mpaghara ndị dị mkpa na Northeast India.
Ndị ọrụ nke Ministry of Aviation (MoCA) na Authority Authority India (AAI) nọ n'oge mmalite ọrụ ụgbọ elu ahụ.
Njikọ ikuku n'etiti isi obodo Manipur & Meghalaya bụ ihe ndị obodo ahụ na-achọ kemgbe.
N'ịbụ onye a ma ama maka ọnụnọ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a na-akwanyere ùgwù, Shillong bụ ebe agụmakwụkwọ maka Northeast India niile. Shillong na -arụkwa ọrụ dị ka ọnụ ụzọ ámá maka Meghalaya.
N'ihi enweghị ụgbọ njem ọ bụla kpọmkwem, a manyere ndị mmadụ ka ha jiri ogologo njem were awa iri na abụọ gaa n'okporo ụzọ iji rute Shillong site na Imphal ma ọ bụ ha ga-ebu ụgbọ elu gaa Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati, mgbe ahụ ọrụ ụgbọ ala. iru Shillong. Mmecha njem ahụ niile were ihe karịrị otu ụbọchị iji rute Shillong site na Imphal ma ọ bụ nke ọzọ. Ugbu a, ụmụ amaala nwere ike efefe n'etiti obodo abụọ site na ịhọrọ ụgbọ elu nke naanị nkeji 12 site na Imphal ruo Shillong na nkeji 1 site na Shillong ruo Imphal.